PEACEFUL PA: August 2016
One More Night With the Frogs by Hugh Pyle
“မောရှေကလည်း ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်အိမ်များမှ ဘားတို့ကို ပယ်ရှင်းဖျက်ဆီး၍၊ မြစ်၌သာ နေစေခြင်းငှါ၊ ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်ကျွန်များ၊ လူများအဘို့ အကျွန်ုပ် တောင်းပန်ရသောအချိန်ကို ချိန်းချက်တော်မူပါ ဟု လျှောက်သော်၊ နက်ဖြန်နေ့ တောင်းပန်လော့ဟု မိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊” - ထွက်မြောက်ရာ ၈း ၉- ၁၀။
နေရာတကာမှာ ဖါးတွေ။ အိပ်ယာထဲမှာ ဖါးတွေ။ မီးဖိုထဲမှာလည်း ဖါးတွေ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဖါးတွေ။ ပေါင်းအိုးထဲမှာ ဖါးတွေ။ မုန့်နှဲတဲ့ ခွက်တွေထဲမှာ ဖါးတွေ။ “မလွှတ်ဘူးဟု ငြင်းလျှင်၊ သင်၏ပြည်တလျှောက်လုံးကို ဘားတို့ဖြင့် ဒဏ်ခတ်ဦးမည်။” (ထွက် ၈း ၂) ဘုရားသခင်က သူ့စကားအတိုင်း အလုပ်လုပ်တယ်။ အီဂျစ်အမျိုးသမီးက သူ့မုန့်အိုးကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ငယ်သံပါအောင် အော်ပြီး ဖါးတွေ ထွက်လာတယ်။ အိပ်မလို့ အိပ်ယာခင်းကို ဆွဲလိုက်တဲ့သူက အိပ်ယာအောက်မှာ ဖါးတွေ အပြည့်ဖြစ်နေပြီ။ အင်္ကျီအိပ်ကပ်ထဲ လက်နှိုက်တဲ့သူက အိပ်ထဲမှာ ဖါးတွေ ပြည့်နေပြီ။ အီဂျစ်ကလေးတွေ ကျောင်းသွားတော့ လမ်းမှာ ဖါးတွေကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်ကျ။ တယောက်နဲ့တယောက် ရွံ့နဲ့ ပေါက်တမ်း မကစားဘဲ ဖါးနဲ့ ပေါက်တမ်း ကစားကြတယ်။ နန်းတော်ထဲမှာ ဖါး။ တဲစုတ်လေးမှာ လည်း ဖါး။ ဖါးကလေး၊ ဖါးကြီး အစုံပါပဲ။ ဖါးအော်သံတွေက နားပင်းလုပါပဲ။ အိမ်ထဲမှာ ဖါး၊ ခြံထဲမှာ ဖါး။မြစ်ထဲက တက်လာတဲ့ ဖါးတွေဟာ တောင်လို ပုံနေပြီး ညှီစော်နံနေပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ ဖါရောဘုရင် ဒဏ်မခံနိုင်တော့ဘူး။မောရှေကို ခေါ်တယ်။ “ထာဝရဘုရားသည် ဘားတို့ကို ငါနှင့် ငါ့လူတို့ထံမှ ပယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်လော့။ ဣသရေလလူတို့သည် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကို ငါပေးမည်ဟု ဆို၏။”
မောရှေ ပျော်မှာပေါ့။ ဖါရောဘုရင် စိတ်ပြောင်းပြီကိုး။ ပြောင်းလဲပြီပေါ့။ ဖျက်ဆီးဖို့ အချိန် ပြောပါဆိုတော့ "To morrow!" မနက်ဖြန် တဲ့။ နားမလည်နိုင်စရာပဲ။ သူ့အစားအသောက်ထဲမှာ ဖါးတွေ။ အိပ်ယာမှာ ဖါးတွေ။ အဝတ်အစား တွေထဲမှာ ဖါးတွေ။ တအိမ်လုံးမှာ ဖါးတွေ။ ဘုရားသခင်က ဖါးတွေ ရှင်းပေးတော့မယ်။ ဖါရောမင်းက ပြောလာတယ်။ “မနက်ဖြန်”။ ဒီတညတော့ ဖါးတွေနဲ့ နေချင်သေးတယ်ပေါ့။ ဘာလို့များ ဖါးတွေနဲ့ နောက်ထပ်တည နေချင်ပါလိမ့်။
ဖါရောဘုရင်က “မနက်ဖြန်” တဲ့။ ဘုရားဝိညာဉ်တော်ကတော့ “ယနေ့တွင် သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်တော် အသံကို ကြားလျှက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံး မရှိကြနှင့်။” - ဟေဗြဲ ၃း ၇- ၈။ ဖါရောဘုရင်က , "To morrow." “မနက်ဖြန်”။ ဝိညာဉ်တော်က "To day!" ဒီနေ့။
“မနက်ဖြန်” ဆိုတာ လူအများစု ပြောတတ်တဲ့ စကားပဲ။
ဆက်ကပ်ဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ့်ကို အဖိုးအခပေးပြီး ရွေးဝယ်ထားတယ်။ (၁ကော ၆း ၂၀) လူက ဘုရားအတွက် အရိုးသားဆုံး ပေးလှူနိုင်တဲ့အရာဟာ ဆက်ကပ်မှု၊ ဝိညာဉ်တော်နဲ့ ပြည့်ဝမှုပဲ။ ဆက်ကပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန်မှ။ မနက်ဖြန်လို့ပဲ ပြောတတ်ကြတယ်။ မအောင်မြင်တဲ့ အသက်တာမှာ ဖါးတွေနဲ့ နောက်တည နေချင်ကြတယ်။
ဘုရားနဲ့ဝေးနေသူကို ပြောကြည့်ပါ။ သူ ဝန်ခံမှာပါ။ “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ လုပ်ရမှာပေါ့။ ဘုရားနဲ့ ဝေးကတည်းက ဘဝမှာ ဒုက္ခတွေပဲ ကြုံနေတာ။ ဒီဘဝကို စိတ်ပျက်နေပါပြီ။ လူက မကျန်းမာတော့ဘူး။ စိတ်ညစ်နေပြီ။ ပြဿနာတွေပဲ ကြုံနေရတယ်။ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး။ သွားပြီ။ ဘုရားထံ လှည့်ပြန်ရမယ်။” ဒီစကားကြားရင် တယ်ဟုတ်ပါလား တွေးမိမယ်။ “ကဲ၊ အခု ဒူးထောက် ဆုတောင်းရအောင်” ဆိုရင်တော့၊ သူက သူ့ဇာတိအလိုဆန္ဒ ဖါးတွေနဲ့ နောက်တည နေချင်ဦးမှာပါ။ လောက အပေးအယူ ဖါးတွေနဲ့ နောက်တည နေချင်ဦးမှာပါ။
နယူးယော့မြို့က ၁၅ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတယောက်ကို မြေအောက် မိလ္လာပိုက်ခန်းထဲမှာ နေတာ တွေ့ကြရတယ်။ အဖေနဲ့ အဆင်မပြေဘူး။ အိမ်မှာ မနေချင်တော့ဘူး။ မသုံးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မိလ္လာပိုက်ခန်းထဲမှာ လာနေတယ်။ ၂ ပတ်ကြာမှ မွေ့ယာအစုတ်ပေါ်မှာ အိပ်နေတဲ့ သူ့ကို ရဲက တွေ့တယ်။ မိလ္လာခန်းထဲက ကြွက်တွေကြားမှာ ရေနံဆီမီးဖိုအစုတ်ကလေးနဲ့ ချက်ပြုဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ၂ ပတ် ရှိပြီ။ သူ့ကို ရဲ့ အိမ်ပြန်ပို့တော့ သူ့အဖေက “ဘာဖြစ်လဲကွာ။ အဖေ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင် အိမ် ပြန်လာခဲ့ပေါ့။” တဲ့။
အသက်တာ လဲကျတဲ့သူတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဘုရားသခင်က ပြန်လာစေချင်ပြီ။ လောက အညစ်အကြေးတွေထဲမှာ ဆက်နေချင်သေးတယ်။ အခု ပြန်လာဖို့ လိုတယ်။ “ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဖေါ်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကို လွှတ်၍၊ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။” (၁ယော ၁း ၉)
ဘာကြောင့် သခင်ယေရှုထံ မလာသလဲ? ခွင့်လွှတ်မယ်။ အပြစ်ဝန်ထုပ် ပင်ပန်းတာတွေ အနားရစေမယ်။ ကယ်တင်မယ် ဆိုပေမယ့် လူက မနက်ဖြန်မှ လာမယ်။
“မနက်ဖြန်” ဆိုတဲ့ စကား လုကာ အခန်းကြီး ၉ မှာ သခင်ယေရှု ၃ ခါ ကြားခဲ့ရတယ်။ လူတယောက်က “သခင် ကိုယ်တော်ကြွတော်မူရာ အရပ်ရပ်သို့ အကျွန်ုပ် လိုက်ပါမည်။” လို့ လျှောက်တယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဂတိပဲ။ ဒါပေမယ့် သခင်ယေရှုက “မြေခွေးသည် မြေတွင်း ရှိ၏။ မိုးကောင်းကင်၌ ကျင်လည်သော ငှက်သည် နားနေရာ အရပ်ရှိ၏။ လူသားမူကား ခေါင်းချရာမျှ မရှိ။” လို့ ပြောပြတဲ့အခါ ဘာမှ ဆက်မကြားရတော့ဘူး။ ဆက်ကပ်မှုဆိုတာကို နားမလည်ခဲ့ဘဲ ပြောတာကိုး။ အဲဒီတော့ အိမ်မှာ ဖါးတွေနဲ့ နောက်တည ဆက်နေတော့မှာပေါ့။
နောက်တယောက်ကို “ငါ့နောက်သို့ လိုက်လော့” လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ (အငယ် ၅၉) ဒါပေမယ့် သူက “သခင်၊ အကျွန်ုပ်အဘကို ရှေးဦးစွာ သွား၍ သင်္ဂြိုဟ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ။” ရှေးဦးစွာတဲ့။ သူ့ကိစ္စကို အရင် ဦးစားပေးတာပါ။ အဖေသေလို့ သင်္ဂြိုဟ်တာက ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုရားကို ဦးစားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော့အထင်တော့ သူ့အဖေက မသေသေးပါဘူး။ လူအများစုက ခရစ်တော်ထက် ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းကို ဦးစားပေးတတ်ကြတယ်။ ဘုရားထက် လူတွေရဲ့ အကြိုက်ကို လိုက်တတ်တယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရားကျောင်းသွားရမယ့်အစား တခြားအိမ်မှုကိစ္စတွေကို ဦးစားပေးနေသူတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ “လူသေတို့သည် မိမိလူသေတို့ကို သဂြီိုဟ်ပါလေစေ။ သင်မူကား သွား၍ ဘုရားသခင် နိုင်ငံတော်၏ အကြောင်းကို ဟောပြောလော့။” လို့ သခင်ယေရှု ပြောရသူတွေပါ။
တတိယ တယောက်ကတော့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမယ့်ပုံပါ။ “ကိုယ်တော်နောက်သို့ အကျွန်ုပ် လိုက်ပါမည်။ သို့သော်လည်း …..” တဲ့။ အဲဒီ သို့သော်လည်းက ပြဿနာပါပဲ။ အသင်းတော်အများစုက သိုးခြံမဖြစ်ဘဲ ဆိတ်ခြံ ဖြစ်နေပါတယ်။ လုပ်မယ်ဆိုပေမယ့် ဆင်ခြေပေးနေကြတယ်။ “အိမ်၌ရှိရစ်သောသူတို့ကို အရင်သွား၍ အခွင့်ပန်ပါရစေ။” ဒီမှာလည်း အရင်တဲ့။ “ထွန်ကိုင်းကို ကိုင်လျက် နောက်သို့ လှည့်၍ ကြည့်သောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် မထိုက်မတန်။”
ရေဗက္ခာက ဣဇက်အတွက် သတို့သမီး ဖြစ်ရမှာကို ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တယ်။ (အပြစ်သားဟာလည်း ကောင်းကင်သတို့သား သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ချက်ချင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။) မိဘ ဆွေမျိုးတွေက “မိန်းမကလေးသည် အကျွန်ုပ်တို့ထံမှာ၊ ဆယ်ရက်ခန့်လောက် နေပါစေဦး။ နောက်မှ သူ့ကို သွားပါစေမည်ဟု ဆိုကြ၏။” (အပြစ်သား တယောက် ခရစ်တော်ထံ မရောက်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက ကြိုးစားကြသလိုပါ။)
အာဗြဟံရဲ့ ကျွန်က အချိန် မဆိုင်းစေချင်တဲ့အခါ၊ သူတို့က မိန်းကလေးကို ချော့ပြောတယ်။ “ရေဗက္ခာ ဒီလူနဲ့ လိုက်သွားမလား” (ကမ္ဘာ ၂၄း ၅၈) ရေဗက္ခာက ရှင်းပါတယ်။ “လိုက်ပါမယ်။” တဲ့။ ဆင်ခြေတွေ မပေးဘူး။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က First နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှာ ဖါးတွေအကြောင်း တရား ဟောဖူးတယ်။ လူငယ်တွေ ကယ်တင်ခြင်း ရကြတယ်။ အဲဒီမှာ တခြားအသင်းတော်က မိန်းကလေး တယောက်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ သူက အသင်း ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ သူလည်း ကယ်တင်ခြင်းရလို့ ဝမ်းသာနေတယ်။ အဲဒီအသင်းတော်ကနေ သူ ထွက်လိုက်ပြီ။ “ဆရာ၊ ကျွန်မ ဖါးတွေနဲ့ ဆက်မနေနိုင်တော့ဘူး။” တဲ့။
ကဲ၊ ဖါးတွေနဲ့ ဆက်မနေသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၃ ချက်လောက် ရှိပါတယ်။ ပထမက …
မနက်ဖြန်မှာ ဖါးတွေ ဆက်ရှိနေနိုင်သေးတယ်။ ဖါးတွေက အမြဲ ဆက်နေနိုင်တယ်နော်။
သူဌေးတယောက် သခင်ယေရှုထံကနေ စိတ်ပျက်စွာနဲ့ ထွက်သွားတယ်။ သူက ငွေကို တပ်မက်နေတယ်။ သူ့ဘဝမှာ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေဟာ ဆက်ရှိနေပါတယ်။ ဖါးတွေ ရှိနေဆဲပဲ။
ယောနက ထာဝရဘုရားထံတော်မှ တာရှုမြို့ကို ထွက်သွားတယ်။ (ယောန ၁း ၃) ဘုရားသခင်က နိနဝေမြို့ကို သွားခိုင်းတာပါ။ သူက ပင်လယ်ထဲမှာ နောက်တညနေချင်သူပါ။ ဒါက ပြဿနာပါ။ လေပြင်းမုန်တိုင်းကို လွှတ်လိုက်ပြီ။ သဘောင်္ လူးလိမ့်နေပြီ။ ယောနကို ပင်လယ်ထဲ မပြစ်မချ မချင်း လေမငြိမ်ဘူး။ ဘုရားခန့်ထားတဲ့ ငါးကြီးက ယောနကို မြိုတယ်။ ဒါကြောင့် ယောနဟာ ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံး ရေငုတ်သင်္ဘော စီးတဲ့သူ ဖြစ်သွားတယ်။ ဝေလငါးထဲမှာ နေပြီး၊ မြေထဲပင်လယ်ကို ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ယောန ခေါင်းမူးသလား။ ယောနက ခေါင်းမမူးဘဲ ဝေလငါးက မူးသွားတယ်။ သူ့ကို မြိုထားရတာ ပျို့အန်ချင်လာတယ်။ လဲကျတဲ့သူက တော်တော် ဒုက္ခပေးပါတယ်။ ယောနကလည်း တော်တော် ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူ လို့ ပြောရမယ်။ ဒုက္ခရောက်တော့ ဘုရားကို ဆုတောင်းတတ်တယ်။ ဘုရားက ငါးကြီးကို ကမ်းခြေအရောက်ပို့။ ငါးကြီးက အန်ထုတ်ပြီးမှ အနားရ။ ယောနလည်း ကုန်းပေါ် ရောက်လာတယ်။
ဒုတိယအချက် ……. ဖါးထက် ပိုဆိုးတာတွေ ရောက်လာနိုင်တယ်။
ဖါရောမင်းမှာ ပိုဆိုးတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဖါးတွေနောက်မှာ ခြင်တွေ၊ ယင်တွေ၊ ကျိုင်းတွေ၊ မီးနဲ့ အမှောင်တွေ ကို ကြုံရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သားဦးတွေ သေရတယ်။ မာနကြောင့် ကြုံရတာ ဖြစ်တယ်။ “ထိုကာလ၌ လူတို့၏ မောသောမျက်နှာကို နှိမ့်ရမည်။ လူတို့၏ မာနကိုလည်း ရှုတ်ချရမည်။” (ဟေရှာယ ၂း ၁၁) တရားစီရင်တဲ့ အချိန် ရောက်လာတဲ့အခါ ဖါးထက် ဆိုးတာတွေ ကြုံရပါတော့တယ်။
လူအများစုက ငွေမက်တယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ မက်တယ်။ ကျမ်းစာက “ငွေကို တပ်မက်ခြင်းသည် မကောင်းသော အမှုအပေါင်းတို့တွင် မူလအမြစ်ဖြစ်သတည်း။” (တိမောသေ ၆း ၁၀) ငွေကို သိပ်မက်တဲ့အခါ မိသားစု၊ ကျန်းမာရေး၊ သားသမီး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ဘုရားသခင်ကို ပစ်ပယ်လာတယ်။ ဖါးတွေနဲ့ နေပျော်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖါးထက် ဆိုးတာတွေ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
မိသားစုတစု။ သားလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံက ဧည့်ခန်းထက်မှာ ချစ်စရာ။ ဒါပေမယ့် မိဘက ကလေးကို ဂရုမစိုက်။ ငွေပဲ ရှာနေတယ်။ အလုပ် သိပ်ရှုပ်ကြတယ်။ “သင်၏ဒုစရိုက်သည် သင့်ကို ဆုံးမမည်။ သင်၏ဖေါက်ပြန်ခြင်းသည် သင့်ကို အပြစ်ပေးမည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စွန့်ပြစ်သောအမှု၊ ငါ့ကို မကြောက်ဘဲ နေသောအမှုသည် မကောင်းသောအမှု၊ ခါးသောအမှုဖြစ်သည်ကို သိမြင်ရမည်ဟု ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။” (ယေရမိ ၂း ၁၉) တနေ့တော့ သူတို့အိမ်က စပါးကျည် မီးလောင်တယ်။ အထဲမှာ ကလေးရှိနေတာကို ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်လာတယ်။
ဗင်္ဟာဒဒ်က အရက်သောက်နေတယ်။ စစ်တိုက်ရင်း သောက်တယ်။ “စပျစ်ရည်သည် လှည့်စားတတ်၏။ သေရက်စေရက်သည် ရုန်းရင်းခတ်ဖြစ်ခြင်း အမှုကို ဖြစ်စေတတ်၏။” (သုတ္တံ ၂၀း ၁) အဲဒီမှာ ပိုဆိုးတဲ့ ဒုက္ခရောက်လာတယ်။ ရှုရိစစ်တပ်ကြီး ရှုံးနိမ့်ရပြီး ဗင်္ဟာဒဒ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒုက္ခကြုံရတယ်။ အရက်ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
တတိယအချက်က - မနက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိချင်မှ ရှိတော့မှာပါ။ “နက်ဖြန်နေ့ကို အမှီပြု၍ မဝါကြွားနှင့်။ တရက်အတွင်းတွင် အဘယ်သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ကို မသိနိုင်။” (သုတ္တံ ၂၇း ၁)
“ဤမျှလောက် ကြီးစွာသော ကယ်တင်တော်မူခြင်း တရားကို ငါတို့သည် နားမထောင်ဘဲနေလျှင်၊ အပြစ်ဒဏ်နှင့် အဘယ်သို့ လွတ်ကြလိမ့်မည်နည်း။” (ဟေဗြဲ ၂း ၃) ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပနေတဲ့ ရက်တွေမှာပဲ လူတွေဟာ ရုတ်တရက် မတော်တဆမှုတွေနဲ့ ထာဝရကာလထဲကို ချက်ချင်းကြီး ရောက်သွားနေကြတယ်။ မနက်ဖြန်ဟာ မသေချာဘူး။ သေချာတာက ဒီနေ့ နောင်တရဖို့ပဲ။ သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးဖို့ပဲ။ ဘုရားသခင်က ဘယ်သူ့ကိုမှ မပျက်စီးစေချင်ဘူး။
လူဆိုးတွေ သေရလည်း ဘုရားသခင် မပျော်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သည်းမခံနိုင်တဲ့အချိန် ရောက်လာတတ်တယ်။ “ထာဝရဘုရားကလည်း ငါ့ဝိညာဉ်သည် လူတို့တွင် အစဉ်မဆုံးမရ။” (ကမ္ဘာ ၆း ၃) ဂတိတော်ကတော့ “ခမည်းတော်သည် ငါ့အားပေးတော်မူသမျှသော သူတို့သည် ငါ့ထံသို့ လာကြလိမ့်မည်။ ငါ့ထံသို့လာသောသူကို ငါသည် အလျှင်းမပယ်။” (ယောဟန် ၆း ၃၇) ဘုရားက သူ့အပိုင်း သူလုပ်ပါတယ်။ သားတော်ကို စေလွှတ်တယ်။ အသွေးသွန်းတယ်။ အပြစ်အတွက် အဖိုးအခကို ပေးခဲ့တယ်။ နောက်တပိုင်းက ကိုယ့်အပိုင်း။ သခင်ယေရှုကို အားကိုးလိုက်ပါ။ “သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏” (ယောဟန် ၃း ၃၆)
တင်နက်ဆီးပြည်နယ်မှာ အမျိုးသမီးတယောက် ကယ်တင်ခြင်းတရား ကြားရတယ်။ ဆုတောင်းဖို့ ခေါ်တော့ သူ လက်မြှောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ ရှေ့ထွက်မလာဘူး။ နောက်တနေ့ အဲဒီအမျိုးသမီး ရုတ်တရက် ဆေးရုံပို့ရတယ်။ နေ့လည်လောက်မှာ ဆုံးသွားတယ်။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိချင်မှ ရှိတာမျိုးပါ။ လူငယ်တယောက် ကားတာယာ လဲနေတယ်။ ပေါက်ကွဲပြီး မျက်နှာကို မှန်တယ်။ ဆေးရုံပို့ပြီး ၂ ရက် အကြာမှာ ဆုံးတယ်။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာဘူး။ မာနတ်ကတော့ လူကို ဘုရားသခင်ထံပါး မချဉ်းကပ်အောင် အချိန်ဆွဲခိုင်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာဘူး။
“ယခုပင် နှစ်သက်ဖွယ်သော အချိန်ရှိ၏။ ယခုပင် ကယ်တင်ရာနေ့ရက်ကာလ ရှိ၏။” (၂ ကော ၆း ၂)
(ဒီတရားစကားကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ သခင်ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဘဝမှာ ဖါးတွေနဲ့ နောက်တည ထပ်မနေပါနဲ့တော့။ ကိုယ့်အပြစ်ကို ဝန်ခံပြီး၊ သခင်ယေရှုခရစ် ကားတိုင်မှာ အသေခံပေးတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းခံနိုင်ပါပြီ။)
Posted by Papa at 6:37 PM
Labels: Dr. Hugh Pyle, Sermon Outlines, တရား